Dagaalka Siyaasadeed ee Ethiopia iyo Masar oo Wejiyo Cusub Yeeshay iyo Somaliland oo lagu soo daray | Somaliland Post
Home News Dagaalka Siyaasadeed ee Ethiopia iyo Masar oo Wejiyo Cusub Yeeshay iyo Somaliland...
Dagaalka Siyaasadeed ee Ethiopia iyo Masar oo Wejiyo Cusub Yeeshay iyo Somaliland oo lagu soo daray
Hargeysa (SLpost)- Dagaalka siyaasadeed ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Masar isla-markaana Salka ku haya biyo-xidheenka Itoobiya ka dul-dhistay Webiga Niil, ayaa Maalinba weji cusub u gudbaya.
Bilihii u dambeeyay oo dhan waxa lagu guul-daraystay inay wada-hadlaan oo ay heshiis gaadhaan Dawladaha Suudaan, Itoobiya iyo Masar oo ka wada faa’idaysta Biyaha Webiga Niil, maaddaama oo uu khilaaf xooggani si gaar ah uga dhexeeya Masar oo Dadkeenu 90% biyaha ka helaan Webiga Niil iyo Itoobiya oo Webigaasi ka dul-dhistay biyo-xidheen ay ku baxday Adduun Lacageed oo ka badan 4 Bilyan oo dollar, si ay mustaqbalka uga dhaliso Tamarta Laydhka.
Sababta ugu weyn ee heshiis loo gaadhi la’yahay, ayaa Warbaahinta dunidu waxay ku sheegtaa Itoobiya oo ka dhego-adaygaysa inay joojiso Biyo-xidheenka ama ugu yaraan dib u dhigto buuxintiisa oo laga cabsi qabo inay yarayso qulqulka biyaha gaadha Masar, taasi oo Masarna meel adag ka taagan tahay.
Laakiin, Siyaasiyiinta Maxaliga ah ee Itoobiya oo arrintan isha ku haya, ayaa qaarkood waxay sheegayaan in Masar ay sii xoojisay dagaal ay sheegeen inuu weligeedba ka dhexeeyay Itoobiya.
Obang metho oo ah Madaxa Urur lagu Magacaabo ‘Dhaqdhaqaaqa Midnimada’ oo xaruntiisu tahay Addis Ababa, ayaa maqaal dheer oo uu ku baahiyey Internet-ka, wuxuu ku sheegay in Masar beddeshay dagaalkeeda ka dhanka ah Itoobiya, isla-markaana ay dagaalkii ka dhigtay mid dadban, si ay u waxyeelayso Amniga gudaha ee Itoobiya iyo dhaqaalaheeda.
Wuxuu sheegay, in Masar doonayso inay xidho Marinada Ganacsi ee Itoobiya, gaar ahaan Dekedaha badda Cas, sida Somaliland, Jabuuti iyo Eritrea, si loo go’doomiyo Itoobiya, si taasi ugu suurto-gashana ay qas iyo amni-xumo ka abuurayso badda cas iyo Sues Kanal-ka, arrimahaasi oo dhan oo uu sheegay inay yihiin dagaal dadban oo ku socda Itoobiya.
“Tani waxay u dhigantaa dib u bilaabid iyo ballaadhinta dagaalka dadban, si loo go’doomiyo Itoobiya, siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanb.” ayuu qoraalkiisa ku sheegay Obang metho, waxaanu intaa ku daray in Masar ay doonayso inay xanibto Marinada Ganacsi ee Itoobiya “Waxa kale oo ay isku dayeysaa (Masar) inay xidhnaadaan jidadka ganacsiga ee Itoobiya, sida dekedaha Badda Cas ee Ereteriya, Jabuuti iyo Somaliland…”
Obang metho oo qoraalkiisu dheeraa waxa kale oo uu ku sheegay in Masar arrimahaasi oo dhan fulintooda u isticmaalayso Siyaasad iyo Sirdoonkeeda.